Sidee loo diiwaangeliyaa LinkedIn? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee loo diiwaangeliyaa LinkedIn?
Waxaa laga yaabaa 12, 2021 0 comments 398
Xaqiiqdii waad maqashay shabakadaha bulshada ee xirfadeed kuwaas oo ah qalab aad u fiican oo shaqo lagu raadsado. Mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee la heli karo ee loo isticmaali karo noocan ah warbaahinta bulshada ayaa ah inaad iska qorto LinkedIn.
Markaa waad ogaan doontaa macluumaadka ugu saxsan ee ku saabsan barxadda LinkedIn si aad ugu bilaabi karto diiwaangelinta si fudud.
Waa maxay LinkedIn
LinkedIn waa shabakad bulsheed ee ugu weyn xirfadaha dhammaan wixii la abuuray 2003 si loo daboolo baahida sii kordheysa ee dhalinyarada shaqo doonka ah. Sidoo kale, waxay qancineysaa baahiyaha shirkadaha u arka shabakaddan bulsheed inay beddel u tahay buuxinta shaqooyinkooda bannaan.
Maanta, shabakaddan shaqada bulshada waxaa adeegsada dhammaan kooxaha da 'kasta, shaqadeeduna way dhaaftay si fudud u soo bandhigidda astaanta shaqada ee adeegsadayaasheeda. Sababta oo ah, LinkedIn waxay ballaarisay waxqabadyada lagu fulin karo boggeeda internetka si loo wanaajiyo khibrada isticmaaleyaasheeda.
Intaa waxaa dheer, waxay leedahay a Codsiga moobiilka casriga ah si ay isticmaaleyaashaadu u qaadan karaan shabakadaha shaqadooda markasta. Sidan oo kale, waxay awoodi doonaan inay ku ogaadaan waqtiga dhabta ah wixii war ah ee ku dhaca shaqadooda meel kasta oo ay joogaan.
Maxaa loogu talagalay LinkedIn?
Shabakaddan bulsheed waxay bixisaa adeegyo badan oo xirfadeed oo kala duwan oo diiradda lagu saaray labadaba isticmaalayaasha shaqooyinka raadinaya iyo sidoo kale shirkadaha doonaya inay ku shaqaaleysiiyaan. In kasta oo, tani ay tahay ujeeddada ugu weyn ee LinkedIn, waxaa jira adeegsiyo badan oo la siin karo shabakaddan bulsheed ee xirfadleyda.
Isticmaalka ugu weyn ee dheeraadka ah ee la siin karo shaqadan shabakada bulshada waa kuwan soo socda:
La wadaag astaantaada shaqo oo la samee saaxiibtinimo xirfadlayaal ka socda meelaha la xiriira si loo ballaariyo wareegga shaqada.
Hubi shaqooyinka la siiyo oo la wadaag sidaa darteed asxaabtaada mid kamid ah shabakadan bulshada ayaa codsan kara.
La soco dhamaan wararka ganacsiga, shaqooyinka iyo shirkadaha si aad ula socoto dhacdooyinka dunida shaqada.
Abuur nuxur oo kordhi dhagaystayaasha gudahood astaanta shabakaddan bulsheed ee xirfadeed.
Talaabooyinka Isdiiwaangalinta LinkedIn
Saxeexida LinkedIn waa mid fudud sida abuurista isticmaale shabakad kale oo bulsheed. Sidoo kale, diiwaankaaga waxay ku filnaan doontaa inaad hesho emayl, koonto Google ah ama isticmaale Facebook ah.
Tallaabooyinka lagu diiwaangaliyo shabakadda bulshada ee LinkedIn ayaa lagu sharxi doonaa hoos:
Gali Bogga rasmiga ah ee LinkedIn.
Riix batoonka "Hadda ku soo biir" kaasoo ku yaal geeska midig ee kore ee bogga.
Gali emaylkaaga oo abuuri eray sir ah. Waxa kale oo aad dooran kartaa "Isqor Google" si magacaaga iyo isgaradku si otomaatig ah u ansax noqdo oo loola xiriiro.
Gali magacaaga hore iyo kan dambe oo taabo "Sii wad".
Ku buuxi foomka macluumaadkaaga shaqsiyeed iyo kuwa shaqaba.
Tallaabooyinkan ka dib, diiwaangelinta isticmaalaha ee 'LinkedIn' ayaa diyaar noqon doonta waxa kaliya ee ay tahay inaad samayso ayaa ah inaad bilowdo u habeynta koontada.
1 Waa maxay LinkedIn
2 Maxaa loogu talagalay LinkedIn?
3 Talaabooyinka Isdiiwaangalinta LinkedIn
Sidee looga soo kabanayaa fariimaha la tirtiray ee Facebook?
Sidee loo badbaadiyaa sheekooyinka la tirtiray iyo farriimaha Facebook?